Etihad Airways: Chiratidzo cheRunyararo pakati peIsrael neUAE nendege dzeAUH-TLV
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Etihad Airways: Chiratidzo cheRunyararo pakati peIsrael neUAE nendege dzeAUH-TLV
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa UAE Nhau • nhau • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kubhururuka pakati peUnited Arab Emirates neIsrael, pakati peAud Dhabi neTel Aviv, zvinopfuura chiratidzo cherunyararo. Idzi nendege uye hukama hwazvino hune rugare hunoreva bhizimusi hombe, zvakare kune indasitiri yekufamba neyekushanya. Iyi hutsva hutsva kuMiddle East idanho rinokosha revanhu uye nekubuda kwemikana mikuru yebhizinesi.
Etihad Airways ichave ichibatanidza Israeri nenhamba nyowani yenzvimbo dzepasirese kuburikidza ne Abu Dhabi hub, ichiwedzera makwikwi akaomarara kuTurkey Airlines Istanbul hub.
Raingova gore kana maviri apfuura apo iyo inflight yemepu yemepu kuEtihad Airways isina kuratidza Israel. Ichi chave chikamu chekurwira kuunza runyararo kuMiddle East. Musi waGumiguru 19 yendege yakaita nhoroondo in kubhururuka pakati penyika mbiri idzi kekutanga.
Kubva munaKurume 28, iyo nendege yenyika yeUnited Arab Emirates ichavhura zuva nezuva dzakatenderedzwa nendege kubva kuAud Dhabi kuenda kuTel Aviv, hupfumi uye tekinoroji nzvimbo yeIsrael.
Kuvhurwa kwendege kunotevera kurongeka kwehukama pakati penyika mbiri, uye kusainwa kweAbor Abraham Accords pakati peUAE neIsrael muWashington DC musi wa15 Gunyana. Mwedzi chete gare gare, Etihad akazova wekutanga GCC mutakuri kushandisa mutengesi mutyairi kuenda nekubva kuTel Aviv musi wa19 Gumiguru 2020.
Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, akati: "Zvichitevera kusainwa kwechibvumirano chitsva chenyika mbiri, Etihad inofara kuzivisa kubatana kwakananga pakati pemaguta akakosha aya.
"Kutanga kwendege dzakarongwa inguva yenhoroondo uye seyendege, inosimbisa kuzvipira kwaEtihad kumikana iri kukura yekutengeserana nekushanya kwete chete pakati penyika mbiri idzi asiwo mukati medunhu nekunze."
Iyo sevhisi nyowani inoshanda kubva musi wa28 Kurume 2021 ichapa hukuru sarudzo uye nyore kune-po-po-bhizinesi bhizinesi uye vafambi vezororo pakati peUAE neIsrael. Izvo hazvizongokurudzira chete yakananga inbound kutenderera ku Abu Dhabi, asi zvakare ichapa Emiratis neUAE vagari mukana wekuwana nhoroondo dzeIsrael nzvimbo, mabhishi, maresitorendi uye husiku husiku.
Kuenda kunozoitwa zviri nyore kuti ubatanidzwe kuburikidza neAud Dhabi kune makiyi masuo epakati petieti yeEtihad inosanganisira China, India, Thailand neAustralia.
Kubhururuka kuenda, kubva, uye kuburikidza neAud Dhabi kuri kutsigirwa zvakanyanya neiyo Etihad Wellness sanitisation uye chengetedzo chirongwa, icho chinoita kuti mwero wepamusoro wehutsanana uchengetwe pamatanho ese erwendo rwevatengi. Izvi zvinosanganisira vakadzidziswa Wellness Ambassadors, wekutanga muindasitiri, avo vakaunzwa nendege kuti vape ruzivo rwakakosha rwehutano hwekufamba pamwe nekutarisira pasi nepane nendege dzese, saka vashanyi vanogona kubhururuka vakasununguka uye nerunyararo rwepfungwa. Rumwe ruzivo nezve matanho akasimba ari kutorwa neEtihad Airways kupa hutano uye nehutano hutsva ruzivo rwunowanikwa ku etihad.com/wellness